ကျ မ ငယ်ငယ်လေးထဲ က မိဘတွေ ဆုံးသွားလို့ အဒေါ်နဲ့ ရင်းနီးတဲ့ ရန်ကုန်က ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုတစ်ခုက မွေးစားထားလို့ ရန်ကုန်ရောက်နေတာ… မွေးစားတယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ့်မိသားစုလိုဘဲ ငယ်ငယ်လေးထဲက ပြုစု စေါင့်ရှောက်လာကြတာပါ. ဘဝမှာ ဘာမှ လိုလေသေးမရှိဘူး… မွေးစားအကိုဆိုလဲ ကျမကို ညီမလေး အရင်းလိုကို ချစ်တာ… အမှားတစ်ခုကို မလုပ်မိခင်အထိပေါ့… အဲဒီနောက်တော့ ငါးရာနှစ်ဆယ့်ရှစ် ကနေ ထောင့်ငါးရာ ဖြစ်လာရတာပေါ့ ရှင့်……။ ဆယ့်ရှစ်နှစ် အရွယ်ထိ ကျမ ဖိုမဆက်ဆံရေးကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ နားမလည်ခဲ့ပါ..။ အချိန်ရှိသ၍ ကျောင်းစာနှင့် အားလျင် ခြံထဲဆင်း၍ အားကစားလုပ်နေခဲ့သည်က များသည်..။ ကိုကိုနှင့် ကျမ ရေချိုးခန်းထဲမှာ မထင်မှတ်ပဲ ဆုံတွေ့မိကြရာမှ ကာမနွံထဲမှ ရုန်းမထွက်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်..။ ကိုကိုရဲ့ တယုတယ နမ်းရှိုက် ယက်စုပ်ပေးခဲ့မှုက ကျမစိတ်တွေ ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါသည်..။ကြီးထွားရှည်လျားလှတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကို အနီးကပ် ကိုင်တွယ်လိုက်မိကတည်းက ကျမ…ကျမ….။ တွေးသာကြည့်ကြပါတော့ ရှင်.. အဲဒီ စောစောပိုင်းက အဖြစ်အပျက်တွေဟာ မတိုင်ပင်ရ ၊ မစီစဉ်ထားရပဲနှင့် အချိန်ကိုက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတာပါ..။ နောက်ပိုင်းမှ သိရတာ
က ကိုကိုတစ်ယောက် ရေချိုးကန်ဘေးနားက သူ့နားနေခန်းလေးထဲမှာ ကြီးထွားစေသော ဆေးများလူးလိမ်းကာ သူ့စိတ်တွေ တအားဖောက်ပြန်နေသည်ကို ကျမ လုံးဝမသိခဲ့ရပါ..ကျမ မထင်မှတ်ပဲ ကိုကို့ကို လိုက်ရှာရင်း သူ့နားနေခန်းလေးထဲကို ရုတ်တရက်ရောက်သွားခဲ့မိရာက။ ကိုကိုဟာ သူ့ဟာကြီးကို ဆုတ်ကိုင်လျက် တအားငြီးငြူနေတာကို မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ ကျမ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သူ့အနားကို ကပ်ပြီး လက်လွတ်စပယ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်လေ..။ အဲဒီရဲ့ နောက်မှာတော့ ကိုကိုနဲ့ ကျမငယ်ငယ်တို့ ကာမပင်လယ်ကြီးထဲကို မမောနိုင်မပန်းနိုင် ကူးခတ်နေခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေထဲ သက်ဆင်းခဲ့ရတော့တာပါ ရှင်..။ ကိုကို့ရဲ့ အစုပ်အယက်သန်မှုကြောင့် ကျမဟာလေး ရွသထက် ရွ ၊ ဖောင်းသထက် ဖောင်းကာ လာခဲ့ရပါသည်.။ အတွင်းသားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်နဲ့ တုန်ခါလာပြီး အရည်တွေဟာ အိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ မြင်မကောင်းအောင်ပင် စိုရွှဲကာနေပြီး ကျမမှာလည်း အသက်ရှူမမှန်နိုင်အောင်ပင် မောနေရသည်..။ ကျောင်းအားကစားပွဲမှာ မမောမပန်းတမ်း သက်လုံကောင်းစွာနဲ့ ပြေးလွှားခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမ အခုတော့ အိပ်ယာလေးပေါ်မှာ မောနေပြီး ရင်ထဲမှာလည်း တလှပ်လှပ်နဲ့ ခံစားနေရသည်..။ ကိုကို အားပါးတရ ယက်စုပ်ေ
ပးမှုကို ခံနေရတဲ့ ကျမ ခါးလေးကော့ကော့ပြီး တွန့်လိမ်ကော့ပျံလို့နေရသည်..။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ကုတင်ဘောင်ကို တင်းနေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားရသည်..။ အံကြိတ်ထားပေမယ့် ငြီးငြူသံတွေက မထိန်းနိုင်ပဲ တိုးတိတ်စွာ ထွက်ပေါ်လို့နေသည်..။ ဆီဆွတ်ထားတဲ့ ကိုကိုဟာကြီးက အဖျားမြုပ်အောင် ကျမဟာလေးထဲသို့ ဝင်လာသည်..။ “ အ..အ…….ဝင်…ဝင်…..ဝင်သွားပြီ….ကိုကိုရဲ့…အိ..အ….” ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားတော့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက ကျမစောက်ဖုတ်လေးမှာ ဖြူဝင်းတင်းကားပြီး စူထွက်လာတယ်…။ အဲဒီအခါကျမှ ကိုကို့ရဲ့ နီတာရဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဟာကြီးကို ကျမအဖုတ်လေး အဝမှာ တေ့ပြီး ဖိချလိုက်သည်..။ပထမ ဗြစ်…ပလွတ်….ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ဖက်ဟာ ကိုကို့ရဲ့ ဟိုဟာကြီးနဲ့ အတူ အထဲကို လိပ်ဝင်သွားပြီးမှ ဒုတိယ ပလွတ်ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ အထဲဝင်သွားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေဟာ ပြန်ကန်ထွက်လာပါတယ်..။ တတိယ ကျမစောက်ပတ်လေး တ
င်းကြပ်စွာနဲ့ ကိုကို့အချောင်းကြီးကို ညှစ်ထားလိုက်မိပါတယ်..။ အိ…အီး….ဟင့်….ဝင်..ဝင် သွားပြီ…ကိုကိုရဲ့…အင်း…အင်း…. ကိုကို့ လက်တွေက ကျမရဲ့ ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေပေါ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ပွတ်သပ်ရင်း အထက်ကို တက်လာပြီး လုံးဝန်းဆူဖြိုးနေတဲ့ ကျမ နို့တွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ဆုတ်ကိုင် ဖြစ်ညှစ်ပေးလာပြန်တယ်..။ ပြီးတော့မှ ဖူးဖူးရွရွ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို အငမ်းမရ ဖိကပ်စုတ်ယူလိုက်ကာ လက်နှစ်ဖက်က ဂျိုင်းအောက်ကနေ လျှိုသွင်းပြီး ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်မလိုက်သည်..။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်ထွက်သွားမတတ် စုပ်ယူလိုက်ရင်းမှ ဖိဆောင့်ချလိုက်ခြင်း ခံလိုက်ရသည်..။ “ ဗြစ်…ဗြစ်……အင့်…အား…..နာတယ်….ကိုကို…..နာတယ်…..အမလေး လေး…..အီး…ဟီး ဟီး….”
ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ဖြတ်ဖြတ်လူးနေအောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်..။ ကြီးထွားတုတ်ခိုင်လှတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးက ကျမစောက်ပတ်လေးထဲကို ထိုးထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း ပြည့်သိပ်တင်းကြပ်စွာ ဝင်ရောက်လို့ ခေါင်းကိုရမ်းခါပြီး အော်ဟစ်လိုက်မိတယ်..။ ဟိတ်…သိပ်မအော်နဲ့လေ…..ညီမလေး…ရဲ့…ရှီး…..အား…ဟား……ကျွတ် ကျွတ်….နာတယ်….ကိုကို….ပြန်…ပြန်နှုတ်ပေးပါ…ကိုကိုရယ်….အင်း..ဟင်းဟင်း….ခဏလေးပါ…..ညီမလေး ရဲ့…နော်…..” ကိုကိုက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျမ နို့လေးတွေကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ငုံပြီး စို့လိုက်ပြန်ပါတယ်..။ လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေပါ…။ ကျန်တဲ့ နို့အုံတစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်နေပြန်ပါတယ်..ရှင်..။ နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားများနဲ့ ဖွဖွလေးကိုက်ထားပြီး။ လျှာဖျားလေးနဲ့ လိမ့်ပတ်ကလိပြန်သလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်တဲ့ နို့သီးခေါင်းတစ်ခုကို လက်ချောင်းလေးတွေကြား
မှာ ညှစ်ပြီး ပွတ်ချေပေးလိုက်ပြန်တော့..။ ကျမ တစ်ကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားသလို အစောက နာကျင်မှုတွေလည်း ကွယ်ပျောက်ကုန်ကြသည်..။ အံ့တော့ အလွန် အံသြစရာပါပဲ…ရှင်..။ တကယ်ပါပဲ…တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းခနဲ ဖိန်းခနဲ ခံစားလာရသည်..။ အစောက နာကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲကလည်း တရွရွနဲ့ သိပ်ကို အရသာ ရှိနေပြန်ပါတယ်..။ ဒါနဲ့ ကျမ ခါးလေး မသိမသာ တွန့်လိမ်လိုက်မိသည်..။ ခုနကလိုပဲ ကိုကို ကျမ ပုခုံးကလေးကို စုံဆွဲကိုင်ပြီး တစ်ချက် ဖိဆောင့် လိုက်သည်..။ “ ဗြစ်….ဘွတ်…..” “ အား…အာ့…..ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်….နာတယ်…..” တစ်ချက်ဆို တစ်ချက် သိသိသာသာကြီး နစ်ဝင်လာတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးက အထဲမှာ ဘာနဲ့ ထောက်မိနေသည် မသိ…။ တစ်ဆို့ဆို့ကြီး ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိလိုက်ပြန်ပါသည်..။ ကြီးထွားသလောက် အဖုအထစ်ထစ်နဲ့ အကြောကြီးများ ယှက်ဖြာနေတဲ့ ကိုကို့ရဲ့ ဟာကြီးမှာလည်း အဆုံးမရောက်တရောက် ထိဝင်နေပါပြီ..။ အဲဒါကိုလည်း ယောင်ရမ်းပြီး လက်နဲ့ ဖမ်းဆုပ်မိလိုက်လို့ သိရပြန်ပါတယ်..။ ကြွက်တွင်းကလေးထဲကို မြွေကြီးတစ်ကောင် ဝင်အောင်းနေသလို ဖင်မလှဲ့သာ ၊ ခေါင်းမလှဲ့သာ အနေအထားမျိုး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဆီးစပ်နှစ်ခုစလုံးရဲ့ ထိကပ်နေတာမို့ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သွေးတိုးနေတာကိုလည်း သိသာစွာ နှစ်ဦး
စလုံး ကြားသိနေရပါသည်..။ ကိုကို ဆက်မဖိသွင်းသေးပဲ အသာရပ်ပြီး ကျမရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ပွတ်ဆုပ် ချေပေးပြီး။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ပါ လက်ချောင်းများနဲ့ ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်ပေးပြန်သည်..။ လက်တစ်ဖက်က ကျောဖက်ကနေ ပွေ့ပိုက်ထားပြီး တော့ ကော့တက်နေတဲ့ ကျမရဲ့ တောင်ပူစာလေးနှစ်ခုသဖွယ် မောက်ကြွဆူဖြိုးနေတဲ့ နို့လေးတွေကို မျက်နှာနဲ့ လျှောက်ပွတ်သပ်ကာ အငမ်းမရ စို့လိုက်ပြန်သည်..။ လက်တစ်ဖက်က နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်သပ်နေရာက မဆွဲသာဆွဲသာ အကွဲကြောင်းလေးထိပ် အစေ့လေးကို လက်ချောင်းနဲ့ ကလော်ထုတ်ပြီး ဖွဖွလေး ဖိပွတ်နေသည်..။ နို့ကို စို့နေတဲ့ ပါးစပ်ကလည်း ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့နေရာက အတန်ကြာေ
တာ့ အထက်အောက် ပြိုင်တူ နို့သီးခေါင်းလေး ဖိကိုက်တာရယ်..၊ စောက်စေ့ကလေးကို ပွတ်ချေတာရယ် အချိန်ကိုက် ပွတ်သပ်လှိမ့်ချေလိုက်ပြန်ရာ..။ “ အား….ဟင်း..ဟင်း….အာ့….ယား….ကျွတ်..ကျွတ်….” ကျမ အဆက်မပြတ် ငြီးတွားရင် ကိုကို့ ကျောပြင်ကြီးကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်တွယ်ပစ်လိုက်သလို ကားထောင်ထားတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းကလည်း ကိုကိုရဲ့ ခါးပေါ်ကျော်ခွပြီး လိမ်ကျစ်ပစ်လိုက်မိရပြန်သည်..။ ကိုကို ဆက်မဖိသေးပဲ အသာရပ်ပြီး ကျမရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ပွတ်ဆုပ် ချေပေးနေပြီး။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကိုပါ လက်ချောင်းကလေးတွေ နဲ့ ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်ပေးပြန်သည်..။ လက်တစ်ဖက်က ကျောဖက်ကနေ ပွေ့ပိုက်ထားပြီး ကော့ကြွတက်နေတဲ့ ကျမရဲ့ တောင်ပူစာေ
လးနှစ်ခုသဖွယ် မောက်ကြွဆူဖြိုးနေတဲ့ နို့လေးတွေကို မျက်နှာကြီးနဲ့ လျှောက်ပွတ်သပ်ခါ အငမ်းမရ စို့လိုက်ပြန်သည်..။ လက်တစ်ဖက်က နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်သပ်နေရာက မဆွဲသာဆွဲသာ အကွဲကြောင်းထိပ် အစေ့လေးကို လက်ချောင်းနဲ့ ကလော်ထုတ်ပြီး ဖွဖွလေး ဖိပွတ်နေသည်..။ နို့ကိုစို့နေတဲ့ ပါးစပ်ကလည်း ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့နေရာက အတန်ကြာတော့ အထက်အောက် ပြိုင်တူ နို့သီးခေါင်းလေး ဖိကိုက်တာရယ် ၊ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ချေတာရယ် အချိန်ကိုက် ပွတ်သပ်လှိမ့်ချေ ပေးလိုက်ပြန်ရာ… “ ဟင်းဟင်း…..အင့်..အား….အ…….ယား…….ကျွတ်ကျွတ်….” ကျမ အတောမသတ် ငြီးတွားရင်း။ ကိုကို့ရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်တွယ်ပစ်လိုက်သလို ကားထောင်ထားတဲ့ြေ
ခနှစ်ချောင်းကလည်း ကိုကိုရဲ့ ခါးပေါ် ကျော်ခွပြီး လိမ်ကျစ်ပစ်လိုက်မိရပြန်ပါသည်..။ အတန်ကြာ လှိမ့်ချေ ပွတ်သပ်ပေးနေမှုကို ကျမ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်အောင် ဖြစ်လာရပြန်ပါသည်..။ “ ဟင်းဟင်း…..အင်း…….အ…..အ…..တ..တစ်မျိုးကြီး…ကိုကိုရယ်….ညီမလေး မနေတတ်တော့ဘူး……ဟင်းဟင်း……….” ဘယ်လိုမှ အောင့်အီးမထားနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး ဖွင့်ဟ လမ်းကြောင်း ထုပ်ပြောလိုက်မိပါတော့သည်..။ ကိုကိုဟာ ကျမ စကားအဆုံးမှာ သူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ကျောအောက်မှာ လျှိုသွင်းလိုက်သလို နို့တွေစို့နေတဲ့ ကိုကို့မျက်နှာဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဗိုက်သားဆီကို ဖိပွတ်နမ်းရှိုက်သွားပြန်သည်..။ ဒီလို နမ်းရှိုက်မှုကလည်း ကျမအဖို့ တစ်မျိုးအရသာ ရှိလွန်းလှပါတယ်..။ ကိုကိုဟာ ကျမဗိုက်သားကို နမ်းရှိုက်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုထောင်မတ်၍ ကျမကိုလှမ်းကြည့်ပြန်ရာ ကိုကို့မျက်နှာမှာ ချွေးတွေစို့ထွက်ပြီး နေတာ တွေ့ရပြန်တော့ ဘာကြောင့်မှန်း မသိပါဘူး..။ ကျမလေ ကိုကို့ကို တအားသနားသွားမိပြီး ကျမလက်တွေနဲ့ ကိုကို့မျက်နှာက ချွေးတွေကို သုတ်ပေးလိုက်သည်.။ ကိုကို ကျမကို တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး… “ တက်လိုးတော့မယ် နော်……ညီမလေး…..” ။ “ အင့်….အင်း…..သဘောပဲ…ကိုကို….သိပ်များ နာအုံးမလား…ကိုကို….” “ နဲနဲတော့ နာအုံးမှာ…..အောင့်ခံလိုက်ပါအုံး…ညီမလေးရယ်….နောက်ဆို တအားကောင်းလာမှာ….ပါ….” ကိုကို ကျမကို စကားပြောရင်းက ရင်ဘတ်ကို ပွတ်သပ်ပြီး နို့တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းကြီး အုပ်ကိုင်လိုက်ပြန်တယ်…။ ဆုတ်ချေပြီးပြန်တော့ နို့နှစ်လုံးစလုံးဟာ ထူပူနေပါတယ်…။ ကိုကို
နို့တွေကို ဆုပ်ကိုင်ချေရင်းက အောက်ဖိပွတ်သွားပြီး ကျမ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ကာ ဆတ်ခနဲ ဖိဆောင့်လိုက်ပါတယ်..။ “ ဗြစ်……ဖောက်……..ဒုတ်……..အား…….” စူးစူးနင့်နင့်ကြီး တိုးဝင်လာတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကြောင့် ကျမ စောက်ပတ်အောက်မှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ပြီး နာကျင်သွားသလို စောက်ပတ်အတွင်းထဲမှာလည်း သူဟာကြီးရဲ့ ထိပ်က ဘာကိုထိုးဖောက်သွားမှန်း မသိ…၊ ရင်ထဲကို လှိုက်တက်သွားရပါတယ်..။ ကျမ စောက်ပတ်လေးတော့ ကွာပြဲသွားပြီ ထင်ပါရဲ့ ရှင်….။ ကိုကို ကျမခါးလေးကို ဆွဲကိုင်ပြီး သူ့ဟာကြီးကို တဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်နေပြန်ရာ အထဲ လက်နှင့်လျှိုသွင်းပြီး အသဲတွေအူတွေ ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရပါသည်.။ အဝင်နာသလောက် ပြန်အထွက်မှာလည်း နာတာပါပဲ….။ အဲသလို ဆွဲချွတ်နေတဲ့ အခိုက်ကလေးမှာပဲ ကိုကို့လက်တစ်ဖက်က ကျမ နို့တစ်ဖက်ကို ဖမ်းကိုင် ဖျစ်ညှစ်လှိမ့်ချေပေးလိုက်ပြန်သည်..။ အောက်ပိုင်းက နာကျင်နေသလောက် အပေါ်ပိုင်းကို ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးနေမှုက ကောင်းနေပြန်သည်..။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ တင်းထောင်ထလာစေတဲ့အထိ ပါပဲ..။ တင်းထောင်စပြုနေတဲ့ အဲဒီ နို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက်ကို ကိုကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံစို့ပြန်သည်..။ ကိုကို့ရဲ့ ထုံးစံထင်ပါရဲ့…။ ပါးစပ်ရော လက်ရော နို့သီးခေါင်းကို ပြိုင်တူ ကြိတ်ချေပေးတဲ့အခါ ကျမ တွန့်လိမ်သွားရပြန်သည်..။
အံမယ်လေး……အသံတွေတောင် ထွက်နေအောင်ပဲ နို့တွေကို စို့ပေးနေလိုက်ပြန်သည်..။ နို့ကိုစို့ပြီး အထက် ရင်ညွန့်သားလေးတွေကို စုပ်ယူလိုက်ပြန်သည်..။ အထူးသဖြင့် ရင်ပတ်အလယ် အထက်တဲ့တဲ့ လည်ပင်းရဲ့ အောက်ခြေကလေးကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ယူလိုက်တော့ ကျမလဲ သိပ်ကို ခံစားလိုက်ရပါသည်…။ နာလို့ မဟုတ် …၊ ယားသလိုလိုဖြစ်ပြီး အမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ရပ် ပြိုင်တူ ခံစားလိုက်ရပြီး ခါးလေးကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပစ်လိုက်မိပါသည်…။ကိုကို့ဟာကြီး အဖျား ရောက်သွားတဲ့အထိ ဆွဲချွတ်သွားပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းလာပြန်ပါသည်..။ ကျမ စောက်ပတ်လေးမျာ တနင့်တပိုးကြီး ဝင်လာတဲ့ ကိုကိုရဲ့ လီးကြီး… ကန်တော့နော်…ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါရစေတော့… တစ်ရစ်ပြီး တစ်ရစ် တင်းကြပ်လာသည်..။ “ ဗြစ်…..ဗြစ်….ဖွတ်……ဖွတ်….ဖြစ်……” “ အင့်…..အင်း…အင်း….ကျွတ်……….ကျွတ်……အီး………” ကျမ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့သွားရပြန်သည်..။ ကြီးထွားလွန်းတဲ့ ကိုကို့လီးကြီးက ရှည်လျားလဲ ရှည်လျားလွန်းပါသည်..။ အဲသည် လီးရှည်ရှည်ကြီးထိပ်က စောက်ပတ်ထဲက သားအိမ်ကို ထိုးထောက်မိလာသည်..။ ရုတ်တရက် ကျမ ကျင်ခနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး ပါးစပ်မှ အသံထွက် ငြီးငြူရင်း ကိုကို့ရဲ့ ဂုတ်ပိုးကို မမှီမကမ်း ဖိချ ဆွဲဖက်လိုက်ရသည်..။ “ နာလို့လား….ဟင်…ညီမလေး…..” “ ဟင့်အင်း…ကျပ်တီးကျပ်တောင့်ကြီး….အောင့်လည်း အောင့်တယ်….ကိုကိုရဲ့……” ကျမ ငြီးသံကြောင့် ကိုကိုဆက်မဖိသေးပဲ…မျက်နှာလေးကို ပွတ်သပ် ၊ နဖူးပေါ်ဝဲကျနေတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို ဖယ်ရှားရင်းမှ ပြောရှာပါသည်..။ “ သားအိမ်ကို ထောက်မိလို့နဲ့ တူတယ်….” “ ဟင်…ဟုတ်လား….ဒါ…ဒါဆိုရင်..ခ…
ခလေး…..မွေး…..မွေး……..”။ အော်…ညီမလေးရယ်…..လိုးတိုင်း ခလေးမွေးကြမယ်ဆိုရင် လူတွေ တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက်ထပ်ကုန်ကြတော့မှာပေါ့…ညီ….ညီမလေး…..ဗိုက်….ဗိုက်ကြီးမှာ ကြောက်….ကြောက်…….ရှက်…….ရှက်လဲ…. မကြောက်ပါနဲ့…ညီမလေးရယ်…..ဗိုက်မကြီးအောင် လုပ်တဲ့ ခေတ်မှီဆေးဝါးတွေ ရှိတယ်…ဟ….ဟုတ်လား…ကိုကို……ဟုတ်တယ်…တစ်ခါလုပ်ထားရင် ငါးနှစ်လောက်ကတော့ ဗိုက်မကြီးဘူး….စိတ်ချ…. ဒီလိုဆို…….တော်ပါသေးရဲ့…..ကိုကိုရယ်……။ ခုကိုကို ညီမလေးကို လိုးတာ လူကြီးတွေ မသိစေနဲ့နော်…..ဟုတ်လား… အင်း… ကိုကို ကျမကို တယုတယ နမ်းရှိုက်နေရင်းမှ စကားတွေ အမျှင်မပြတ် ပြောဆိုနေသလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း နို့တွေရော ဗိုက်သားလေးတွေရော ပေါင်တွင်းသားလေးတွေပါ မကျန် ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးပြန်တော့ နာကျင်ခံခက်တာတွေ ပြေပျောက်သွားရပြန်သည်..။ ကိုကို ကျမစကားအဆုံးမှာတော့ ဖင်ကြီးကို ကြွပြီး စောက်ပတ်လေးထဲ နစ်ဝင်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲချွတ်သွားပြန်သည်.။ တဝက်လောက် အရောက်မှာ ဆတ်ခနဲ ဖိဆောင့်လိုက်သည်…။ “ ဗြစ်….စွပ်…….ဖွတ်…ဖတ်…..စွပ်…..” “ အင့် အင့်….အင့်…….ဟင်း.ဟင်း……အီး…..” “ ခုတော့ …ကိုကို ကျမငြီးသံလေးကို လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်ပြီး အဆက်မပြတ် ဖိဖိဆောင့်ချပါတော့သည်…။
ကိုကိုရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်အစုံနဲ့ ကျမ တွန်းထားမိသည်..။ မရပါ..။ကြီးမားတုတ်ခိုင်သလောက် အဖုအထစ် အကြောပြိုင်းပြိုင်းကြီးများ ထနေတဲ့ လီးကြီးဟာ အဆုံးထိ နစ်ဝင်လာလိုက်။ အဖျားထိ ဆွဲချွတ်လိုက် ဖိသိပ်ကပ်ဆောင့်လိုက်နဲ့ မြန်မြန်ကြီး ကိုလိုးဆောင့်နေပြန်သည်..။ဗြစ်…..စွပ်….ဖတ်…….ဖွတ်…..စွိ.စွိ…အင့်…………ဟင့်…အား…..အိုး……ဟင်းဟင်း…….အရည်များ စိုရွှဲနေလို့ ထင်ပါရဲ့…။ ကိုကို့လီးကြီး တိုးဝင်လာတိုင်း စောက်ပတ်လေးထဲက အသံတွေ ဆူညံစွာ ထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်..။ လီးထိပ်ကြီးက စောက်ပတ်ထဲရှိတဲ့ အသားဆိုင်တွေကို ပွတ်တိုက် တွန်းထိုး မွှေနှောက်ပါများလို့ ထင်တယ်…။ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ပူထူပြီး တင်းကျစ်လာသည်..။ ကောင်းလည်း တအားခံ ကောင်းလာသည်..။ တစ်ချက်တစ်ချက် အရှိန်လွန်ပြီး လီးထိပ်ကြီးက ကျမရဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကို လာလာထောက်မိပြန်ရာ ကျင်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး နာကောင်းကြီးမို့ ကျမ ကိုကို့ ကို အတင်းပဲ မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားလိုက်သည်..။ နောက်ထပ် ဒုတ်ခနဲ မြည်သံလေးနဲ့အတူ ကျင်ခနဲဖြစ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကျင်စက်နဲ့အတို့ခံလိုက်ရသလို တွန့်လိမ်ကော
က်ကွေး သွားရသည်..။ဟင့်…..အင့်….ဖြေး……ဖြေး……ကိုကို….ဟင့်….အီး…ကျမ နှုတ်ဖျားလေး စုချွန် တအင့်အင့်…အော်ဟစ်ငြီးငြူရင်း။ ကိုကို့ရင်ဘတ်ကို ဆီးတွန်းထားလိုက်ရပြန်ပါသည်..။ ဒါပေမယ့် ကိုကို လက်တွေနဲ ဖယ်ချပြီး ကုန်းကြလာတဲ့ ကျမရဲ့ ရင်ဘတ်ကို တွန်းဖိထားပြီး လက်တစ်ဖက်က ကျမ ခါးကို တင်းတင်းဆွဲပြီး ဖိဆောင့်ပစ်နေသည်မှာ အဆတ်မပြတ်တော့ပါ….။ လီးကြီး ဝင်တိုင်း တင်းကြပ်နေတဲ့ ကျမ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများ အနားတွေ စုတ်ကုန်ပြီလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ကိုကို့ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လွန်းလှသည်.။ ဗြစ်…ဗြစ်….ဖတ်ဖတ်………စွပ်စွပ်….ဗြစ်…..အာ….အင့်…အင့်…….ဟင့်………လုပ်…လုပ်ပြန်ပြီ…..ဖြေးဖြေး……ကိုကို……ဟွန့်ဟွန့်…..ဟင်း…..အ…ခ….ခနလေး…အေး……..ခန…ကောင်းလာပြီ….ညီမလေးရဲ့…..” “ ဗြစ်…ဘွတ်…..ဘွတ်….စွပ်…..စွပ်……..” ကိုကိုမောဟိုက်သံနဲ့ အသက်ရှူပြင်းပြင်းကြီး ရှူရှိုက်ရင်း ပြောလျက်မှ မနားတမ်း လိုးသွင်းနေရာ ကျမမှာ နာကောင်းကြီး အီဆိမ့်သော အရသာကို တဖြေးဖြေး ခံစားလာရပါတယ်..။ အား……ကိုကို…..ကို..ညီမလေး….အိုး…ဟီး……..အီး….” ကျမ စကားကို ဆုံးအောင် မပြောနိုင်တော့ပါ…။ ဖင်စအိုဝလေး ကြုံ့ဝင်သွားပြီး ကျင်တက်လာကာ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ခတ်
လာပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး စောက်ပတ်လေးထဲမှ တဆစ်ဆစ်နဲ့ အရေတွေ ဒလဟော ထွက်ကျကုန်ကာ ကျမ……..ကျမ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိရတော့ပါဘူး….ရှင်…။ ကိုကိုရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုကြမ်း ပိုပြင်းလာပါတယ်…။ ရင်ဘတ်ကို ဖိထောက်ထားတဲ့ လက်က နို့တွေကို ဖြစ်ညှစ် ဆုတ်ချေရင်း ခါးကိုကိုင်ဆွဲပြီး တအား ဆောင့်လိုးပါတော့သည်..။ “ ကောင်း…….အင့် ဟင့်……ကောင်းလိုက်တာ….ကို…..အင့်အင့်….ကိုကိုရယ်…….ဟူး……..” ကျမ ဗလုံးဗထွေး ရေရွတ်လိုက်မိပြီး …နာကျင်ပေမယ့် ကျမ တင်ပါးကြီးတွေကို ဘယ်လူးညာလိမ့် တသိမ့်သိမ့် ခံစားရင်း ဖင်ကို ကော့မြှောက်ပေးမိရတဲ့အထိ ကောင်းပြီးရင်း ကောင်းနေတော့တာပါပဲ…။ ဟင့်….အင့်….အိုး……ဟင့်.အီး……ရှီး….အား….. အရည်များ စိုရွှဲနေတဲ့ လီးနဲ့ စောက်ပတ်ဟာ မီးပွင့်မတတ် ဆောင့်လိုးမိလိုက်တဲ့အခါတိုင်း အရေများ ပန်းထွက်ကုန်ရပြန်သည်..။ ဒီလို အဆက်မပြတ် ဆောင့်နေရင်းက ကိုကို့ရဲ့ လီးကြီးထိပ်က ပူနွေးတဲ့ အရည်များ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို ပန်းထုတ်ပေးခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ တခဏအတွင်းမှာ ကျမ ကြက်သီးများထ ရင်ထဲ လှိုက်ဖိုသွားသလို တစ်ကိုယ်လုံး အီဆိမ့်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည်မှာ အိပ်ယာထဲက ထပြီး ခုန်ပေါက်ထွက်ပြေးလိုက်ချင်တော့တာပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုက ကျမရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဖိထားလို့ ထမပြေးနိုင်တော့ပါဘူး ရှင်…. ပြီးပါပြီ။
သူ ငယ် ချင်း လေး